Jaaliyada DDSI Ee Birmingham Oo Qabatay Xaflad Lagu taageerayo shirwaynihii 9aad ee X.D.SH.S.I - Cakaara News
Jaaliyada DDSI Ee Birmingham Oo Qabatay Xaflad Lagu taageerayo shirwaynihii 9aad ee X.D.SH.S.I
Birmingham(cakaaranews), isniin, 7da, November, 2016. Jaaliyadda DDSI ee ku dhaqan Birmingham UK ayaa qabatay xaflad ay ku taageerayaan shirwaynihii 9aad ee XDSHSI ee lagu qabtay tuulada maraacaato ee tuleedka magaalada qabridahar. Xafladaasi ayaaka dhacday hoolka shirirka Small heath waxaa ka soo qeybgalay dhamaan taageerayaasha X.D.SH.S.I.
Xafladan oo ahayd mid si qurux badan loo soo agaasimay ayaa waxaa ugu horayntii ka hadlay ka hadlay Gudoomiyaha Jaaliyadda DDSI ee Birmingham UK Mudane Bile Maxamed Siyaad iyo Ku xigeenka gudoomiyaha jaaliyada Birmingham uk mudane Maxamed Shaafici oo u mahadceliyay Gudiga Xafladan quruxda badan ee lagu taageerayo XDSHSI soo qaban qaabiyay waxaa kale oo u mahad celiyay dhamaan Xubnaha Taageerayaasha XDSHSI.
Waxaa kale oo halkaasi ka hadlay Aqoonyahan Mudane Khaliif Sh Yuusuf oo ka warbixiyay sooyaalkii taariikheed iyo isbadaladii horumarineed ee uu dalku soo maray 25kii sano ee la soo dhaafay iyo gaar ahaan deeegaanka 25kii sano ee u danbaysay iyo faraqa u dhexeeya itoobiyadii shalay iyo itoobiyada cusub ee maanta.
Waxaa kale oo Halkaasi ka hadlay Mudane Mukhtar Cabdulaahi iyo Xasan Cali Yusuf oo ka yimid Gobolka Yorkshire sacada badan u soo socday in ay ka soo qeybgalaan shirka lagu taageerayo XDSHSI ee Jaaliyadda DDSI Birmingham UK Martigalisay waxay halkaasi ku soo bandhigeen Waxqabadka XDSHSI uu qabtay.Waxayna sheegeen in XDSHSI uu mudo gaaban gudaheed lagu keenay isbadal balaadhan oo horumarineed islamarkaana tilmaamay in isbadalkani uu ku yimid oo kali ah kago’naanshiyaha hogaaminta deegaanka iyo taageerada XDSHSI. Waxayna ka mahadceliyeen Taageerayaasha Xisbiga waxqabadka horumarineed, nabadgelyo iyo maamul suuban ee uu deegaanku gaadhay.
Waxaa kale oo halkaasi ka hadlay ganacsato mardhow wadankii ka yimid oo ay ka mid yihiin Mudane Saadaq cali iyo Cabdulaahi Xeef kuwaasi oo ka warbixiyay fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka isla markaana qurbajoogta DDSI fursado maalgasho ka samaystay deegaanka.
Kale qaarka mid ah haweenka qurba joogta DDSI ee Birmingham UK ayaa , tood siwayn u taageeray Shirweynihii 9aad ee XDSHSI ee lagu qabtay Tuulada Maraacaato iyo guusha uu ku soo dhamaaday shirwaynuhu waxayna u soo bambalyeeyeen xubnaha hogaaminta XDSHSI ee lagu soo dhisay shirwaynhaasi 9aad.
Ugu danbayntii Waxaa shirka soo xiray aqoonyahayn Ugaas Xasan maxamed oo uga mahadceliyay dhamaan Xubnaha Taageerayaasha XDSHSI isla markaana Taageeraya Shirweynihii 9aad ee XDSHSI wuxuuna bogaadiyay horumarka iyo nabadgaliyada maamul wanaaga uu deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta gaadhay. Isaga oo sheegay ugaasku in guulaasi lagu gaadhay ka go’aanshaha, kartida iyo bisaylka siyaasaded ee hogaaminta XDSHSI.